Eqinisweni, sinezinkulungwane zemikhiqizo emihle kuzo zonke izigaba zomkhiqizo. Noma ngabe ufuna amalebula aphezulu noma ashibhile, akonga imali ngobuningi, siyaqinisekisa ukuthi angatholakala eMelikey. Uma ufuna ukuthenga i-tableware encane, uMelikey angaqinisekisa ukuthi uhlala uziqhenya ngokuba nokukhetha ngokuhlakanipha. Ukuncelisa ingane kusethwe kugxile ekukhuleni okunempilo kwengane.
Sinikeza ngetafula lezingane elihlukahlukene, kufaka phakathi ibhibhi lezingane, isitsha sokuphakela izingane, ipuleti lengane, ipuleti lezingane nenkomishi, njll. I-dinnerware yethu yezingane inemiklamo eminingi enhle, okumele ilungele ingane yakho. Izinto zemikhiqizo yethu ziphephe kakhulu, ikakhulukazi zihlukaniswe ngokhuni kanye ne-silicone. Izinkuni zemvelo nezinga lokudla abicah zivumela izingane ukuthi zikhule ekudleni okunempilo. Amapuleti wezingane nezitsha zezitsha zithandwa kakhulu emakethe. Izitsha zokuncela izingane namacwecwe ezingane abicah angafanisa amanye amasethi wethu we-china baby Lokhu kubalulekile ekuzondleni kwengane ngesikhathi sokudla, futhi kuxazulule izinkinga zomama. Vumela ukudla kwengane kugcwele ubumnandi!
Amasethi ethu e-dinnerware wezingane eza ngemibala ehlukahlukene, kufaka phakathi umbala womfana nentombazane.Ngokuya kokuhlolwa kwamakhasimende wangempela kwensizakalo yethu, intengo nekhwalithi, anelisekile kakhulu. Lapho sipakisha imikhiqizo nangaphambi kokuthumela, sizohlela ukuthuthwa ngemuva kokuhlolwa kwekhwalithi okuqinile kathathu ukuqinisekisa ukuthi ayikho inkinga ngezimpahla.
Asibona nje abahlinzeki be-tableware bezingane kuphela kodwa futhi nomkhiqizi we-dinnerware. Sinikezela ngezifiso ngokwezifiso idina lesidlo sakusihlwa, ilogo ingagobeka kusana lesidlo sakusihlwa lesethi kanye nesethi yengane yesidlo sokhuni. Siphinde sakhe imiklamo emikhulu nokupakisha kwamakhasimende. Uma unesithakazelo enganeni yethu i-china dinnerware, sicela uxhumane nathi. Ibhizinisi likaMelikey, idizayini, ukukhiqiza, ukuhlangana, kanye neminyango yokuhlola ikhwalithi izokunikeza ngenhliziyo yonke insiza enhle kakhulu. Phakathi kwabaphakeli be-tableware abaningi, uMelikey ngeke akuvumele.
Isethi yesidlo sakusihlwa esihle kakhulu, isitayela esifushane futhi esilula sokuklama, umbala othandekayo futhi omnandi, Vumela ingane idle okugqamile nokuhehayo. Amasethi wezipho zezingane zokudla anganikezwa bonke abantwana abasanda kuzalwa.
1. I-dinnerware ye-babyware ye-silicone engenamanzi kulula ukuyisula futhi uyihlanze
5. Ibanga lokudla le-babyware le-tableware, elingenabuthi futhi liphephile
abicah ingane teether , abicah teether , abicah teething ubuhlalu , teething umgexo for baby girl, teething yemvelo, teether kangcono ngenyanga 4 ubudala ,